Cat & Mouse dia 5 miraingiraingy azon'ny, 9 payline voankazo milina lalao hita ao amin'ny mFortune Casino. Mahafinaritra ny lalao dia ahitana marika toy ny totozy fotsy, ny volontsôkôlà saka, ny saka sy ny totozy kitapom-bola mariky, ny mousetrap ary ny sasany fromazy, ary koa ny karatra nitsinjaka sarobidy. Misy ihany koa ny loka efatra lalana izay mahakasika ny saka sy ny totozy manenjika izay hamela anao mba handresy fanampiny vola. Ankoatry ny, ny lalao an'ala dia ahitana marika, aelezo fanehoana an'ohatra, multipliers, maimaim-poana spins ary ny jackpot.
Play Saka & Mouse any Amin'ny Recommended Casino
Ahoana no mba Play ny lalao
Araka ny Cat & Mouse dia voankazo milina lalao, dia tsotra lalao mba hianatra ny fomba milalao. Afaka milalao mba hialana voly mba hahazoana ny mihevitra fa ny lalao na milalao ho an'ny tena vola mba hanomboka handresy tsy fotoana. Hanombohana ny lalao dia afaka mametraka ny loka izay mety ho toy ny ambany toy ny 10p.
Ny voalavo dia ny bibidia sary famantarana izay Solon'i marika hafa, afa-tsy ny aelezo marika na ny tombony lalao famantarana hamita ny mandresy mitambatra.
Ny saka dia aelezo mariky. Raha mihodina telo na mihoatra aelezo marika eo amin'ny andalana iray dia ho nahazo maimaim-poana spins.
Ny saka sy ny totozy kitapo-bola dia ny jackpot mariky ary raha mihodina dimy ireo tamin'ny mavitrika payline, dia ho nahazo ny manontolo jackpot.
Raha mihodina roa na mihoatra totozy lavaka amin'ny mavitrika payline, dia hiditra ny tombony lalao. Ho nentina tany amin'ny biraom-mitendry amin'ny totozy sy ny saka. Ianao dia mila hakodian'ny olona ny dice ao anatin'ny ezaka mba hitandrina ny totozy mialoha ny saka. No hahatananareo araka ny efamira anao-tanety eo sy ny halavan'ny fotoana mitantana ny hitandrina ny totozy mialoha ny saka. Afaka handresy payouts lehibe amin'ity lalao.